Text 1; text 2; ... ३० सम्मका पाठ पथहरू प्रस्तुत गर्दछ जसलाई एउटा स्ट्रिङमा संयोजन गर्नु पर्दछ ।
=DOLLAR(255) ले $255.00 फर्काउँदछ ।
FIND(find_text; पाठ; स्थिति)
निर्दिष्ट गर्दछ जसमा स्थिर सङ्ख्या सहित दशमलव स्थानहरूको र हजारौ विभाजकहरू सहित या बाहेक सङ्ख्या प्रदर्शन गर्दछ । यो प्रकार्य सङ्ख्याहरूको स्तम्भमा एकरूपता लागू गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
FIXED(सङ्ख्या; दशमलव; हजारौ विभाजकहरू नभएको)
सङ्ख्या सङ्ख्यामा ढाँचा गर्नलाई सान्दर्भित गर्दछ ।
दशमलवहरूदशमलव स्थानहरू सङ्ख्यामा प्रदर्शन गर्नलाई सान्दर्भित गर्दछ ।
हजारौ विभाजकहरू हुँदैनन् (वैकल्पिक) प्रयोग गरिएका हजारौ विभाजकहरू यात निर्धारण गर्दछ । यदि परामितिको सङ्ख्या ० सँग बराबर नभएको खण्डमा हजारौ विभाजकहरू छोपिन्छन । यदि परामिति ० सँग बराबर भएको खण्डमा वा यो एक अर्कामा मिसिरहेको खण्डमा हजारौ विभाजकहरू तपाईँंको हालको स्थानियता सेटिङ प्रदर्शन गरिन्छ.
=PROPER("open office") ले Open Office फर्काउँदछ ।
क्यारेक्टर स्ट्रिङ भित्र पाठ खण्डको स्थिति फर्काउँदछ ।. तपाईँं विकल्पको रूपमा खोजीको सुरु सेट गर्न सक्नु हुन्छ । खोजी पाठ क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या वा कुनै अनुक्रम हुन सक्दछ । खोजी केस-संवेदनशील होइन.
SEARCH(find_text; पाट; पाठ )
SUBSTITUTE(पाठ; search_text; नयाँ पाठ; वाक्य)
सङ्ख्या दिएको ढाँचा अनुसार पाठमा रूपान्तरण गर्दछ ।
सङ्ख्या रूपान्तरण गर्नुपर्ने सङ्ख्यात्मक मान हो।